Juicer "सलाम": समीक्षा र विनिर्देशों
हामी एक Juicer किन्न निर्णय? तपाईं आकर्षक मूल्य मा एक उच्च-प्रदर्शन उपकरण पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ? तर किनभने बजार मा उत्पादनहरु ठूलो दायरा तपाईं इच्छित उत्पादन को विकल्प निर्धारण गर्न सक्दैन? यहाँ Juicer "सलाम", ग्राहक समीक्षा र वर्णन किनभने त्यसपछि, यो पोस्ट बन्द गर्न हतार छैन विनिर्देशों विशिष्ट तपाईं आनन्द छ।
उत्पादक Juicer "सलाम" - गुणस्तर र सस्तो
Juicer "Salyut-201" तपाईं हार्ड फल र तरकारी देखि रस प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यसको उच्च प्रदर्शन, प्रयोग, संकुचित आकार र न्यूनतम शक्ति खपत सजिलो, प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया रूपमा, भान्सा मा एक अपरिहार्य सहायक मा उपकरण बारी।
लागि स्याउ "सलाम" Juicer न्यूनतम समय मा उत्पादनहरु को एक ठूलो संख्या प्रक्रिया गर्न सक्षम छ। तरकारी वा फल उपकरण एक कचौरा मा पठाउन, तिनीहरूले छाला, कोर देखि पूर्व-साफ र टुक्रा मा कटौती छैन। यस मामला मा, एक Juicer फल को शरीर squeezes र विद्यमान बीउ दिँदै बिना यो बन्द चिमोटे। यसको सरल र प्रयोगकर्ता-अनुकूल डिजाइन, यो उपकरण पनि एक किशोरी ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ।
विनिर्देशों स्याउ लागि Juicer "Salyut-201"
394/344/423 मिमी र प्रकाश वजन - - 13 किलो Juicer नियमित रूपमा कृतज्ञ ग्राहकहरु छोड्न समीक्षा जो "सलाम", एक कम्प्याक्ट आकार छ। धन्यवाद एक सुविधाजनक आकार, यो समस्या बिना भान्सा ठाउँ मा फिट। को साधन नायलन जाल उपस्थिति वाहेक रस को सबैभन्दा ठूलो शुद्धता प्रदान गर्दछ, तर ब्रेक समारोह आवश्यक छ यदि एकाइ को सजिलो र छिटो हल्ट बढवा दिन्छ।
Juicer मोटर जसबाट न्यूनतम समयमा फल को एक ठूलो संख्या प्रशोधन, 1380 RPM को एक गति मा rotates। यसरी उपकरणबाट प्राप्त शुद्धता तरल पदार्थ 94% छ। "पटका" ग्राहक समीक्षा Juicer जो यो 60 भन्दा बढी किलो प्रति घण्टा उत्पादन ह्यान्डल गर्ने ड्रम सफाई को लागि आवधिक रोक्दछ संग लगातार काम को सक्षम छ कि राज्य को। यस मामला मा, यन्त्र यो क्रम स्वयं सजिलै केक हटाउन मा dismantled गर्न सकिन्छ भनेर सरल डिजाइन गरिएको छ।
लाभ Juicer "सलाम"
प्रयोग गर्न सजिलो।
लामो सेवा जीवन।
फल squeezing उपचार आवश्यक छैन अघि।
उत्पादनहरु को एक ठूलो संख्या ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता।
उपकरण नायलन मा उपस्थिति मेष र deceleration प्रकार्य।
एक Juicer "Salyut-201" कहाँ किन्न?
हामी एक उच्च-प्रदर्शन उपकरण किन्न निर्णय? समीक्षाएँ जो पनि सबै भन्दा परिष्कृत उपभोक्ता पूरा हुनेछ Juicer "सलाम", उत्कृष्ट प्राविधिक विशेषताहरु र अपेक्षाकृत कम लागत छ किनभने तपाईं सही विकल्प गरे। यसबाहेक, यो यन्त्र न्यूनतम समय उच्च गुणवत्ता रस को एक ठूलो रकम प्रदान गर्दछ।
विशेषता स्टोर र इन्टरनेट साइट मा सकेसम्म एक Juicer "सलाम" किन्न। आधिकारिक वेबसाइटमा सामान प्राप्त, हरेक संभावित ग्राहक यसलाई नियमित विशेष प्रोत्साहन र छूट प्रदान देखि, एकदम बचत गर्न सक्नुहुन्छ। खरीदार चाहनुहुन्छ भने अत्यधिक योग्य विशेषज्ञहरु मुक्त consultations प्रदान गर्नुहोस्।
1 वर्ष अवधिका लागि उपकरणमा एक Juicer "Salyut-201" उपभोक्ता ग्यारेन्टी खरिद गर्दा। किन, यो अवधिमा एकाइ असफल भएमा, यसलाई असम्भाव्य छ एकाइ को विक्रेता, शुल्क मर्मत को मुक्त, आवश्यक भएमा, एकाइ बदल्ने छ। त्यसैले कस र आकर्षक लागत यो सिद्ध Juicer प्राप्त न।
ओभन सफाई: Catalytic र यसको विकल्प
Blender Braun MQ 535 सस: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा
"Pozis" - फ्रीजर इष्टतम मूल्य र उच्च गुणवत्ता
म भान्सा मा बत्ती आवश्यक: चयन गर्न के?
तर लागि नलिका: प्रकार, वर्णन र प्रयोगको विधि
पाक लागि प्रकारका: चयन गर्न के?
कसरी मिसिन मा कंगन rezinochek बुनाई गर्न? परिसर गर्न सरल देखि
मानव शरीरमा कार्बन मोनोअक्साइड को प्रभाव। कार्बन मोनोअक्साइड द्वारा विषाक्तता को मामला मा मदत
कसरी घर मा आफ्नो कान धुन? केही सुझावहरू
पत्थर राशिफल: माछा र यसको आकर्षण
महिला स्वास्थ्य: जब तपाईं सेक्स मा जन्म दिने पछि संलग्न हुन सक्नुहुन्छ?
समय को कुरा: गर्भावस्था कति हुन्छ
"Lego" मोटरसाइकल - केटाहरू लागि ठूलो खेलौना
हरियो रंग र प्याज छालाको रङ लगाउन अन्डा